Izinyoni – iAfrika
Uma uphupha ubona ipigogo kusho ukuthi uzosebenzela into ethile kanzima kodwa ngeke uphumelele. Okuyibona bodwa abantu ababa nenhlanhla uma bephupha amapigogo ngabalimi. Amaphupho ngenyoni yombani. Amaphupho ngezinyoni.
Tags Amapigogo, Izinyoni
Uma uphupha ubona izikhova kusho ukuthi uneshwa futhi usizi luyeza kuwe. Uma uphupha ukuthi sizichwaneke endlini yomunye umuntu futhi siyakhala izinto ezimbi zizokwehlekalela lowomndeni.
Tags Izikhova, Izinyoni
Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa
Uma uphupha uzingela izinyoni kusho ukuthi uyoba nenjabulo nempumelelo uma uzibamba. Uma kungomunye umuntu ozingela izinyoni kusho ukuthi isithandwa sakho siyakukhohlisa. Amaphupho ngenyoni yombani.
Uma uphupha ubona uthekwane kusho ishwa kuwe ikakhulukazi uma ulibulala.
Tags Izinyoni, Othekwane
Amaphupho ngomhlambi wezinyoni
Uma uphupha umhlambi wezinyoni kusho inhlanhla nokuchuma ekusaseni lakho. Uma ufuye izinyoni kusho ukuthi ibhizinisi lakho liyophumelela kakhulu futhi uyozuza kakhulu kulo. Amaphupho ngenyoni yombani. Amaphupho ngezinyoni. Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa.
Uma uphupha ubona ukhozi kusho ukuthi uzophumelela emsebenzini ikakhulukazi uma ulibulele. Uma lizichwaneka endlini yakho lokho kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezikhathazayo ekhaya lakho.
Tags Izinyoni, Okhozi
Uma uphupha ubona amajuba kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo ikakhulukazi uma endiza. Uma ubona amajuba amhlophe kusho ukuthi izinsizi zakho zizodlula maduze.
Tags Amajuba, Izinyoni
Uma uphupha ubona izinyoni kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma uzizwa zicula – kusho ukuthi kuzoba nenkinga maduze. Uma uzibona zindizela phezulu – lokho kusho ukuthi ukhohliswa ngabantu obucabanga ukuthi ungabethemba. Uma uzibona endle – kusho ukuthi uzozwa izindaba ezingalindelekile. Uma uphupha izinyoni ezinkulu – kusho impumelelo uma ucebile futhi Uma uphupha izinyoni ezincane – kusho … Read more
Uma uphupha ubona ihansi kusho ukuthi uzochuma futhi uphumelele emsebenzini wakho ikakhulukazi uma lenza umsindo.
Tags Izilwane, Izinyoni
Amaphupho ngenyoni yombani
Uma uphupha ukuthi ubona inyoni yombani kuzoba nobunzima emndenini wakho maduzane ikakhulukazi uma inyoni ihlala phezu kwendlu yakho. Qaphela ukuduma kwezulu nombani okwesikhashana ngoba kungenzeka ukuthi usenkingeni. Amaphupho ngezinyoni. Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa.